Ndụ nke onwe onye omee Alexander Skarsgard
Ndụ onwe onye nke onye omeebe Sweden bụ Alexander Skarsgard nwere mmasị na paparazzi ọbụlagodi ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ. O bu ihe kwesiri iburu n'obi na ndi mmadu n'uwa dum biara ya mgbe o kpoghariri n'ime usoro "Ezi Owu" (2008-2014), ebe o na-egwu Eric Northman. Ma na nke a, mgbasa ozi na-acha odo odo na-amalite ịmalite mmasị n'ihe omume ọma ya. Nke a adịghị amasị onye omee ahụ ma ọlị, mana nke ahụ na-enweta ya n'onwe ya. N'ajụjụ ọnụ, o kwuru na paparazzi ga - eme ka ọ ghara ịda mbà n'oge na - adịghị anya: "Ọ dị m ka nchịkọta a ga - ehichapụ ndụ m. Enweghị m ike, dị ka onye nkịtị, soro enyi m nwanyị gaa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, gaa oriri. Ndị nta akụkọ a na ese foto na-achụ m ebe niile. Enweghị m ike ịnọnyere ya na ogige ahụ n'elu bench - n'ebe ọ bụla ha na-ejide aka. "
Onye omeebe Sweden bụ Alexander Skarsgard na ụmụ ya
Ndị nta akụkọ jupụtara n'ọtụtụ isiokwu banyere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị a ma ama. Ya mere, tupu ya enwee mmekọrịta dị njọ nke mbụ, n'afọ 2008, ọ gbaghaara mmekọrịta ịhụnanya na ịma mma Amanda Seyfried, onye na-eme ihe nkiri, onye ọbụ abụ na ihe nlereanya mbụ. Otu afọ mgbe e mesịrị, ọhụụ ọhụrụ ya bụ kpakpando Polish nke bụ Isabella Miko.
Mgbe nanị ọnwa ole na ole n'ime ndụ Alexander Skarsgard, otu nwa agbọghọ gbanwere ọzọ. Ọ ghọrọ onye ọrụ na ngalaba ndị na-agbapụ agbapụ, onye nominee maka Golden Globe na Emmy Awards, onye na-arụ ọrụ nke Sophie-Ann Leclerc na usoro "Ezi Ọbara," Evan Rachel Wood. Ma akwụkwọ akụkọ a, dị ka ndị gara aga, kwụsịrị dị ka ọ na-atụghị anya ya dịka ọ malitere. N'afọ 2009, di na nwunye ahụ mebiri mmekọrịta. Ma, ọ bụghị ruo ogologo oge ka onye omee ahụ nọ nanị - onye ọhụụ ọhụrụ ya bụ onye isi awọ, onye omeebe na onye egwu egwu Alicia Vikander. A na-ahụ ya ọnụ ugboro ugboro na ogige ahụ, n'oge na-adịghịkwa anya, ha gara ememe Comic-Con. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, omee ahụ kwuru na ha na-ezute na, anyị na-ekwu, mmekọrịta dị oke njọ.
N'eziokwu, ha dị oke njọ, dịka Alexander kwenyesiri ike na - ọnwa ole na ole, Charlize Theron nọchiri Alicia, bụ onye onye nkiri ahụ ji ọsọ na-achụgharị n'ihu ọha, na-ejide aka ma jiri nwayọ jide aka ya. N'oge na-adịghị anya, ntụrụndụ ọhụrụ ya abụghị onye a ma ama, Rihanna, onye Lovelace gara ya rie nri abalị. Ma asịrị na Alexander Skarsgard na Nina Dobrev zutere, ma nọgidere na-enweghị nkwenye. Onye na-eme ihe nkiri ugboro ugboro na mkparịta ụka nke ya na onye na-eme ihe nkiri na-enwe mmekọrịta enyi na enyi . Otú ọ dị, na netwọk ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịchọta ịchọta foto.
Alexander Skarsgard nwoke nwere mmasị nwoke?
Ọtụtụ ndị na-eche echiche dị otú ahụ bilitere mgbe usoro nke ọzọ bụ "Ezi Ọbara" pụtara na mpempe akwụkwọ, nke dike nke Swede mara mma na ndị enyi ya na-emekọ ihe ọnụ na nke Theo Alexander. Uzo abuo ka ndi mmadu na-eche banyere ihe omuma a, na otutu ndi oru nta akuko choro, ha abughi ma ha abughi ndi nwoke idina nwoke. Ụmụ nwanyị nwere ike ịme ume na - enwere obi ụtọ - ọkacha mmasị ha bụ onye omeebe nwere nkà, ya mere maka ihe nkiri sinima ọ dị njikere ịghọ vampire na nwoke iji susuo ya ọnụ.
Kate Bosworth na Alexander Skarsgard
N'ụzọ dị iche, Achọrọ m ịkọ akụkọ ịhụnanya banyere ndị a abụọ. Mgbe obere mkparịta ụka na ọtụtụ kpakpando, Kate ghọrọ nanị onye na-emegharị isi isi na-enwe mmekọahụ. Ha abụọ malitere izute na afọ 2009, ma zute ihe nkiri "Nkịta Nta". Ha ezobeghi mmetụta ha site na paparazzi dị egwu, na ọtụtụ mgbe, ha na-agagharị n'akụkụ ahụ, enwere ike ịhụ ha n'ogige ntụrụndụ obodo, na ihe ngosi, ndị ọzọ. Ma na 2011 Kate na Alex kewara site na nkwekọrịta ọ bụla.
Onwe ha kwupụtara: 20 àgwà ọjọọ, ndị ọkachamara gwara
Onye na-awakpo ahụ banye n'ụlọ Rihanna ka ya na ya nwee mmekọahụ
Site na omelette ruo Rapunzel: 8 nke ihe oyiyi kachasị mma nke Rihanna na Mgbakọ Gala
Alexander Skarsgard zutere Margot Robbie?
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'oge okpomọkụ nke 2016 bụ ihe nkiri "Tarzan. Akụkọ ihe mere eme ", bụ ebe ọrụ ndị bụ isi gaa Margo na Alexander. Mgbe ihe nkiri ahụ gasịrị, asịrị na-ekwusara na e nwere ihe ndị ọzọ a ga-eme n'etiti abụọ karịa na-arụ ọrụ otu. Ee, na oge nlere foto ha maka egwu dị iche iche agbakwunyewo ọkụ na ọkụ. Ma, dịka o si pụta, nwata nwanyị ahụ na onye nduzi inyeaka Tom Eckerly na-ezukọ.
Otu enyi nke Ember Hurd kwuru banyere mmesapụ aka nke Johnny Depp
Lottie na Kate Moss meriri ụwa nke ejiji
Angelina Jolie na Oscar-2016
Jay Lo na-abụ abụ na Mark Anthony, Casper Smart wee daa mbà n'obi
Nwa nwanyị dị afọ 6 bụ Beyonce na Jay Zi chọrọ ịzụta eserese maka dollar 19,000
George Bush Jr. danyere na olili ozu
Jennifer Lopez ji aka ya susuo di ya ma ọ bụ nwunye ya ọnụ
Georgina Rodriguez na Cristiano Ronaldo na ihe oyiyi mara mma gara ememe nke onyinye Quina na Lisbon
Na England, zuru ohi ihe odide nke prehistory nke Harry Potter
Angelina Jolie na nso nso nke mbibi?
Amy Adams na-eche nwa nke abụọ?
Megan Markle na Prince Harry na-emekọ ihe: mbụ na-ekele ndị ikwu na ndị fan
Gwen Stefani na Blake Shelton
Umu ndi mmadu choro ka ndi mmadu noo!
Akpụkpọ anụ na mmanụ aṅụ
Nri na elu
19 ihe atụ zuru okè nke Jacqueline Hill
Onye na-abụ abụ Mariah Carey chefuru ka ọ na-eyi uwe mwụda na otu oriri na Las Vegas
Iodophilic na-ata nri na nwatakiri
Oke oyibo maka umu
Onyinye maka nwanyị ruo afọ 30
Rhodiola rosea bụ tincture nke ga-etinye gị n'ụkwụ gị
Uwe ojii oji
Umu Ugbo Umu Umunwanyi
Enwere akpịrị - kpatara
Esi esi nweta mandala?
Esi esi anu
Kagocel na-enye nwa ara
Chemotherapy - nsogbu
Site na nwa na-alụ nwanyị ọhụrụ: 40 foto nke Prince Harry, nke ị gaghị ele anya!
Feng Shui megide oke ibu
Bobotik maka ụmụ amụrụ ọhụrụ - ntụziaka
Ekpere siri ike nye Nicholas nke Miracle-Worker, nke na-agbanwe agbanwe
Black leggings - 26 foto nke fashionable losin n'oge niile
Enwere m ike ịgba ọsọ n'oge oyi na n'okporo ámá?